/blog/LGD-4033 , Ligandrol/Gini mere anyi ji azuta LGD-4033 / VK5211 / Ligandrol powder from AASraw?
Ihe na 02 / 05 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na LGD-4033, Ligandrol.
Kedu ihe bụ LGD-4033?
Gịnị bụ LGD-4033? Anyị na-akpọkwa Ligandrol. Nke a bụ Onye Na-ahụ Maka Androgen Receptor Modulator nke nwere ike ịzụlite iji nyere aka n'ime mmụba nke uru ahụ na uru abụba. A na-eji ọnụ ekwu LGD-4033, ọ bụghịkwa steroidal. Ọ na-ejikọta ya na ndị na-anabolic receptors na-ebute ihe yiri ya na steroid. Otú ọ dị, mmetụta ndị dị na ya dị nnọọ iche na nke ndị steroid. Dị ka ndị mmepe, ngwaahịa a dị n'etiti SARMS nke na-ebute nnukwu ihe, mana nha dị obere karịa ngwaahịa n'okpuru otu ụdị.
LGD-4033 bụ nke ndị Androgen Receptors ligands. Ụdị ọnya ndị a na-ahọrọ na-ahọrọ mgbe ị na-ahọrọ anụ ahụ ka ọ gwakọta. A na-emepụta ha iji belata nkedo nke akwara na-ejikọta ọrịa ndị na-adịghị ala ala na nnukwu ọrịa, ọrịa kansa, yana mfu anụ ahụ n'ihi ịka nká.
LGD nwere ike ịnapụtaghachi ahụ ike, dịka testosterone, ebe ọ na-eme ka nchedo nchekwa nke onye ọrụ ahụ. Ụdị anụ ahụ-nhazi nhọrọ na nchịkwa ọnụ na-eme ka ngwaahịa a bụrụ ezigbo nhọrọ nke na-arụ ọrụ nke ọma na ahụ.
A mụọla na SARM a bụ ihe gbasara 98% dị ọcha na njedebe nke inorganic. Dị ka ndị na-eme nnyocha si kwuo, ngwaahịa ahụ nwere usoro dị ọcha nke na-eme ka onye na-arụ ọrụ ọma rụọ ọrụ mgbe o jesịrị ya.
LGD-4033 nnukwu ntụ ntụ nkọwa
LGD-4033 ntụ ntụ, bụ ụdị na-acha ọcha crystal powder.As na akụrụngwa nke LGD-4033, LGD-4033 nnukwu ntụ ntụ bụ onye nke na-ekpo ọkụ na-ere n'etiti sarms, ọ bụghị naanị n'ihi na nke LGD-4033 powder na-eri, kamakwa beacuse of elu dị ọcha nke LGD-4033 raw, Ee, ọ bụrụ na m zụta LGD-4033 nnukwu ntụ ntụ maka ire ere, ma ọ bụ ụlọ nyocha, ana m ahọrọ zụta LGD-4033 raw online, họrọ LGD-4033 ntụzigharị na-ejikọta ma na-enwe mmekọrịta mmekọrịta.Details nke LGD-4033 nnukwu ntụ ntụ nkọwa na AAS dị ka:
Aha: LGD-4033 / VK5211, Ligandrol
Ụdị Mkpụrụkpụ: C14H12F6N2O
Molekụla arọ: 338.24
Ntọala Melt: 105 - 106 Celsius C
Jiri ọgwụ LGD-4033 mee ihe
LGD-4033, dị ka SARM nile, bụ nke a na-emekarị maka mgbochi mgbu na-egbochi mgbochi. Ka o sina dị, ọ nwekwara ikike inyere aka na-alụ ọgụ cancer, ma nyere ndị agadi aka ịnọgide na-enwe ume na ahụ ike.
Uru nke LGD-4033 maka bodybuilding
1. Mụbaa Mass Mass
Isi ihe dị mkpa nke Ligandrol bụ ngwongwo muscle na-emetụta onye na-eme egwuregwu ga-enweta. Dabere na ihe oriri onye ọrụ nwere ike ịnweta 5-10 lbs nke agbakwunyere muscle uka na usoro 8-12. E nwere akụkọ banyere ndị ọrụ na-agbakwụnyekwu ahụ ike na dose nke 10mg kwa ụbọchị.
2. Mee Ka Ike
Ligandrol ga-eme ka ndị ọrụ ahụ nwee ike ịmalite gbanwee. Nke a dị mma maka ịmepụta ihe dị na ala ma ọ bụ ike zuru ezu na mgbatị. Ndị ọrụ na-akọ na ike mmeri na-emetụta izu 3 ma ọ bụ obere oge. N'ikwu okwu site na ahụmahụ nke onwe m, echere m ya na izu 2. Karịsịa na ụlọ m na-ewuli elu dị ka nchịkọta bench pịa na akụrụ.
3. Ọla abụba & Ọ bụghị Ọkụ Egwu
Dị ka e kwuru na mbụ, a chọrọ Ligandrol ịkwụsị ịkwa ahụ na ndị ọrịa. Nke a bụ nnukwu agbakwunyere maka onye ọ bụla nke na-achọ ime mgbanwe. Ọ na-abụkarị na onye na-eri nri na-eri nri caloric na nke nwere ike ibute ọnwụ. Site na LGD-4033 nke na-eme, n'eziokwu ọ ga-enyere gị aka ịmalite ikpo ọkụ ahụ nanị site na ịme mgbanaka 8. O doro anya na ọ ga - abụ nnukwu mmụba, ma ị ghaghị ịhụ ọdịiche.
4. Ukwu maka Recomping
Ligadrol na-enwupụta n'emeghachi omume dị mfe. Na-eri nri kwesịrị ekwesị na usoro ọzụzụ. Ligandrol ga-agbakwunye ụda ahụ nke ọma na-enweghị agbakwunye anụ ahụ ọ bụla. Site na ahụmahụ m, nke a na-arụ ọrụ nke ọma na S4 ma ọ bụ RAD140. Ọnụ ụbụrụ na nkwonkwo ị ga-enweta na nchịkọta na nke ọ bụla SARM ndị a kpọrọ aha bụ ihe ọchị.
5. Nhọrọ ọzọ maka Steroid
LGD-4033 bụ mfe SARM kasị ewu ewu site na nso. Ihe a na-ekwu maka ndị na-achọghị ịmalite iji ọgwụ steroid mee ihe, nke a bụ ezigbo ngwọta maka gị. Buru n'uche na nke a na - enye gị kpọmkwem mmetụta ndị steroid ga - eme, ma ọ bụ ihe kachasị mma ị ga - enweta na AAS.
Uru nke LGD-4033 ntụ ntụ
1.High ịdị ọcha
Mgbe ị na-azụta LGD-4033 capsule na ụlọ ahịa mpaghara, a na-edozi ọgwụ ahụ, na-adịchaghị ọcha, ma ọ bụ mgbe ị na-azụta ntụ ntụ LGD-4033 na obodo gị, ma ọ bụ ịdị ọcha dị mma, ma ọ bụ ọnụahịa dị oke elu .Ma mgbe ị na-achọ maka LGD-4033 ntụ ntụ na ntanetị, ị nwere ike ịchọta LGD-4033 raw reflex factory, nke dị ọcha nke ngwongwo ha na-enye na-abụkarị nkà mmụta ọgwụ, ọ bụrụ na ịchọtara LGD-4033 ntụzigharị ngwongwo, maka nke a, anyị ga-ekwu okwu mgbe e mesịrị .
Dika intaneti na-adighi ike, ịzụta LGD-4033 ntụ ntụ na-aghọwanye ihe dị mfe ma bụrụ nke e ji n'aka, ị nwere ike ịhọrọ ngwaahịa ndị ịchọrọ ka ahụ ruo gị ala, ọnụ ahịa na-akwụkwa ụgwọ ego, nke ahụ bụ otu n'ime ihe mere ndị mmadụ ji azụta LGD-4033 ntụ ntụ n'elu.
Kedu ihe ọzọ, mgbe ị na-ewere ya maka ozu ahụ, na iche dị iche iche, ị ga-ewere usoro dịgasị iche iche, mgbe ahụ i nwere ike ikpebi ole ị ga-eji jiri onwe gị mee ihe.
Kedu ka esi mee LGD-4033 ntụ ntụ?
LGD-4033 dị irè na doses dị ka 5 mg kwa ụbọchị, ma "ọnyá ntụpọ" bụ 10 mg kwa ụbọchị.
Ọnwụnwa nrịanrịa agafewo dị ka 20 mg + kwa ụbọchị n'enweghị mmetụta ndị na-ezighị ezi na-akpata, yabụ ọ bụrụ na isiokwu nyocha gị nwere mmetụta nke ọma na 10 mg, ị nwere ike ịhọrọ ịmalite dose ahụ n'oge gara aga.
Agaghị m agafe karịa 20 mg kwa ụbọchị.
Ogologo oge okirikiri a tụrụ aro bụ izu 8-12. Ị ga-enweta nlọghachi azụlata akara akara 12-izu.
Ọkara ndụ nke LGD-4033 bụ oge 24-36 ka naanị ị ga-eji LGD-4033 mee otu ugboro kwa ụbọchị.
Ọ dịghị mkpa ọ bụrụ na ị nọ n'afọ efu ma ọ bụ na ọ bụghị mgbe ị na-eme ya.
Ma ebe ọ bụ na mmadụ niile nwere ntachi obi dị iche iche, ị nwere ike ịhazi onwe gị, ọ bụ naanị maka ntinye aka.
E nwere ụzọ ole ị ga-esi jide LGD-4033, nke ọ bụla n'ime ha na-enye ndị na-eme egwuregwu onyinye dị iche iche.
1. Bulking: LGD bụ SARM kachasị mma na klas ya mgbe ọ na-abịa ịkụnye, na 10mg kwa ụbọchị maka izu 8 ga-aba ụba dị ka ọsọ ọsọ. Otú ọ dị, ndị egwuregwu ụfọdụ nwere ahụmahụ ga-aga dị ka 15 ma ọ bụ 20mg kwa ụbọchị. Mgbe ị na-ejikọta LGD, ọ dị mkpa ijide calorie gị na ụgbọ okporo ígwè dịkarịa ala ma ọ dịkarịa ala 3-4 ugboro kwa izu.
2. Ihe na-abaghị uru: Mkpokọta dị mma ga-ejikọta LGD na 5mg kwa ụbọchị na ọnụ ọgụgụ nke S4 andarine na GW cardarine. Iji LGD eme onwe ya ka akwadoghi ya maka ịcha, ebe ọ ga-arụ ọrụ na synergy ndị ọzọ na SARM maka nzube a.
3. Anabolic steroid stack: LGD nwere ike stacked dị ka akụkụ nke gị anabolic steroid cyclone ịgbakwunye uru ahụ ike na ume na-enweghị mmetụta ọzọ mmetụta. Maka nke a, ị nwere ike itinye ebe ọ bụla n'etiti 3 na 15mg kwa ụbọchị LGD n'ime usoro steroid gị.
4. Recomping: Ndị na-achọ ka ị gbakwunye ụbụrụ na-agba ume na-eme ka ọkpụkpụ dị elu ma na-esure anụ abụba n'otu oge ahụ. LGD dị ezigbo mma na nke a mgbe ọ na-agba ọsọ na mpaghara cardin, nri siri ike, cardio na ọzụzụ dị arọ.
5. Ogwe mmiri SARMs: A na-eji LGD eme ihe n'ụzọ a na-eji ejiji na S4 iji nyere aka ụmụ nwoke aka na ike n'etiti steroid cycles. Gbaa 3-5mg kwa ụbọchị nke LGD, na dose dị nwayọ nke S4 tinyere HCGenerate ES. E kwesịghị iji LGD mee ihe n'oge usoro ọgwụgwọ mgbapụta (PCT).
Ihe na-emetụtaghị LGD-4033
Site na nnyocha na ndekọ, mmetụta ndị sitere n'aka LGD-4033 egosila na ọ dị ntakịrị. E nweghị mara mmetụta ma e wezụga ohere nke nta testosterone suppression.This na-adị mfe natara na a Obere-PCT mgbe gị na LGD-4033 okirikiri ezie na bụ ihe ọ bụla nke concern.If ị dị nnọọ gyno ewekarị ị nwekwara ike na-enweta a obere gyno njali elu elu, ma nke a bụ mfe controllable site na-ewere otu Capsule nke Arimi-RX PCT n'akụkụ gị LGD-4033 dose kwa ụbọchị.
LGD 4033 suppression gosiri a dose dabere, ma e nwere kemgbe a ọnụ na ngụkọta na free testosterone nakwa dị ka SHBG. Nchọpụta ndị a na-adọrọ mmasị egosiwo oke ọnụ na LH ma ọ bụ FSH. Nke a na-agba ndị ọrụ ume dị ka ọ na-egosi na ọ bụ ezie na nrụgide, mgbake agaghị adị nso ma ọ bụrụhaala na ọ bụ steroid nke anabolic. LGD-4033 abụghị nke na-egbu egbu ma mmetụta ndị dị na ya dị nwayọọ ruo ntakịrị. Ọ pụtaghị na enwekwuwanye na estradiol, ma, dịka ihe ọ bụla, a ga-edebe aka nchịkọta aromatase na aka.
A na-atụ aro zuru oke pct, dịka na-emegide oghere pct na SARMS ọzọ, mgbe a gbanyechara LGD-4033. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ bụghị dịka nkwụsịtụ dịka ụbụrụ, nhichapụ dị elu karịa SARMS ndị ọzọ, ya mere, chọrọ PCT zuru ezu.
Ntak ịzụta LGD-4033 ntụ ntụ si ụlọ ọrụ AAS?
Ejighariri ihe omumu nke biotechnology nke ohia na 2008, bu nke 5 Chinese Ph na-acho ya na 4033 Chinese Ph. Dọkịta, ndi a na-acho na Chemical Engineering na Mahadum Tulsa, Oklahoma, USA..Main ngwaahịa: anabolic steroid raw raw , nkwonkwo ahụ, nkwarụ, ụba abụba, hormones sex, SARMS, PCT ọgwụ, HGH, homebrew, ugl.N'ihi gịnị ka ọtụtụ ndị ji azụta LGD-XNUMX ntụ ntụ si AAS? Ihe kpatara ya bụ:
1. Elu àgwà na asọmpi ego:
2) Ịdị ọcha> 99% steroids raw raw
2. Nkwenye ngwa ngwa ma dị mma:
1) A pụrụ iziga Ngalaba ahụ na 24 awa mgbe a kwụsịrị ụgwọ. Nọmba ọnụọgụgụ dị
3 Anyị nwere ndị ahịa n'ụwa nile:
3) Ụdị elu, ọnụahịa mpi, nnyefe ngwa ngwa, ọrụ mbụ na-enweta ntụkwasị obi na otuto sitere n'aka ndị ahịa
Tags: ịzụta LGD-4033 ntụ ntụ, zụọ Ligandrol ntụ ntụ, LGD-4033 ntụ ntụ, Ligandrol ntụ ntụ
Ịzụta mmanụ uhie n'elu: 6 ihe ị kwesịrị ịmara! Ịzụta RAD140 ntụ ntụ online: 8 eziokwu ị kwesịrị ịma!